राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीको हत्या - kageshworikhabar.com
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीको हत्या
४ माघ, बाँके । बाँकेमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीको हत्या भएको छ । विभागमा सहायक सूचकको रुपमा कार्यरत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ सूर्यगाउँस्थित लब्दवाका २७ वर्षीय प्रवीण थापाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
गत शुक्रबार सवा बिहान १० बजे नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-१८ सूर्यगाउँमा स्थानीयले शव फेला पारेको थियो। मृतकको सुरूमा पहिचान खुलेको थिएन। अनुसन्धानको क्रममा सोही ठाउँका विभागमा कार्यरत प्रवीण थापा भन्ने खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रवीणको शव उनको घरभन्दा साढे २ किलोमिटर परको खेतमा फेला परेको थियो। थापाको टाउकोमा धारिलो हतियारको चोट छ। उनको पोष्टमार्टम गरी शव परिवारलाई बुझाइसकिइको छ। उनको टाउकोमा हतियारले हानेर हत्या गरिएको देखिन्छ। टाउकोमा लागेको चोटका कारण मृत्यु भएको रिपोर्टमा देखिएको छ।
प्रहरीले यससम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी एक वर्षदेखि विभागमा कार्यरत थिए। हत्या हुनुको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रहरीले घटनासम्बन्धी १०-१२ जनासँग सोधपुछ गरेर छोडेको छ । तर घटनामा संग्लन कसैलाई पक्राउ गरेको छैनन ।
Previous articleव्यावसायिक ड्रागनखेतीबाट राम्रो दाम
Next articleसंकट गहिरिंदै जाँदा ओलीको भरपर्ने थलो, शीतलनिवास !
देशभर मौसम सामान्यतया सफा
आज मिति वि सं २०७७ साल फागुन १९ गते बुधबार । कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
थप ५० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्दै सरकार
श्रीमतीले श्रीमान् बोकेर दौडिने प्रतियोगिताको आयोजना
सिभिल अस्पताल पुगेर प्रचण्डले कोरोनाविरूद्ध खोप लगाए
सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुहबिच पहिलो चरणको वार्ता सकियो
सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुहबिच बालुवाटारमा वार्ता जारी
मकवानपुरमा रुखमा भुण्डिएको अवस्थामा पुरुषको शव फेला
आज मिति वि सं २०७७ साल फागुन १९ गते बुधबार ।...